Fitakiana volabe :: Tratra ilay lehilahy naka an-keriny ny zandriny, telo taona • AoRaha
Andro vitsivitsy taty aoriana, voasambotra ihany ny lehilahy iray, manodidina ny roapolo taona, voatondro ho naka an-keriny ny zandriny lahy, telo taona, tany amin’ny distrikan’i Soavinandriana. Tratra niaraka taminy ihany koa ny vadiny.
Tafaverina amin’ny fiana­kaviana ilay zazalahikely. Vola mihoatra ny iray tapitrisa ariary no azon’ireo voarohirohy tamin’ity endrika fakàna an-keriny ity, araka ny nambaran’ny mpanao famotorana.
Tamin’ny zoma 24 mey no tsy nahitana ny zazalahi­kely iray, zanaka mpandraharaha, tany amina kao­mi­nina iray any Soavinandriana Itasy. Ny ampitson’io ihany dia naharay antso an-telefaonina ho fitakiana vola folo tapitrisa ariary ny ray aman-dreniny ho solon’ny famotsorana azy. Teo dia efa fantatry ny fiana­kaviana fa ny zokin’ilay zaza ihany no nitondra azy an-keriny.
«Iray ray izy mirahalahy ireo sady samy notaizana tao an-trano. Mody nentina nivo­a­ka nitsangantsangana ilay zaza, telo taona, sy ny zaza iray hafa. Nitomany itsy farany ka navotsotra. Noentina tany amin’ny toeran-tsy fantatra kosa ny iray voalohany», hoy ny Kaomisera Seraly Hercule, lehiben’ny Sampandraharaha misahana ny heloka bevava (Scac), etsy Anosy.
Nampandre ny polisin’ny BC etsy Anosy ny ray aman-drenin’ilay zaza tsy hita.
Niainga tamin’ny famantarana ny toerana niavian’ny antso an-telefaonina nataon’ ireo mpaka an-keriny ny fikarohana. Nandefa vola iray tapitrisa ariary tamin’ireo mpaka an-keriny ny lasibatra, ny talata 28 mey.
Taty aoriana, fantatra fa any Andilamena, Faritra Alaotra Mangoro, no misy an’ireo olon-dratsy. Noraisim-potsiny tany ny mpivady voarohirohy, ny alarobia 5 jona. Hita tao ilay zazakely.
Loza tampoka :: Vehivavy maty latsaka tao anaty lakandrano